Waa maxay xayeeysiiska Google Ads | Suubbis Blog
Google Ads (oo hore loogu yaqaano Google AdWords) ayaa ah kan keliya ee ugu caansan ee adeegga advertising ee PPC ee dunida. Mashruuca Ads ayaa u saamaxaya ganacsiyada in ay abuuraan xayeysiisyo ka muuqda mashiinka raadinta Google.
Google Ads wuxuu ku shaqeeyaa habka mushaar-celinta-mushaharka(pay-as-you-pay method), kaas oo dadka isticmaala ay ku dalbanayaan ereyada muhiimka ah iyo bixinta qiimaha kasta oo riixaya xayeysiintooda. Waqti kasta oo raadinta la bilaabo, Google ayaa ku dhaqajinayo Xayeysiinta wuxuu dooranayaa qaar ka mid ah kuwa ku guuleystey inay ka soo muuqdaan goobta hore bogga natiijooyinka raadinta. “Guuleystayaasha” waxaa lagu doortaa iyada oo ku saleysan isugeyn isku-dhafan, oo ay ku jiraan tayada iyo ku-xirnaanta ereyada muhiimka ah iyo ololeyaasha xayeysiinta, iyo sidoo kale cabbirka garashadooda muhiimka ah.
Si gaar ah, cidda u muuqata in ay ka muuqato bogga waxay ku saleysan tahay xayeysiinta iyo Xayeysiistaha, oo lagu xisaabinayo laba lammaane oo muhiim ah – CPC Bid (qaddarka ugu badan ee xayeysiistuhu doonayo inuu isticmaalo) iyo Qiimaynta Tayada (qiimaha xisaabta lagu daro xadiga qima dhimista, haboobanta, iyo qimaha websidh kaga). Nidaamkan wuxuu u fasaxayaa xayeysiiyayaal ku guuleysta inay gaaraan macaamiisha iman kara kharashka ku haboon miisaaniyadda. Waa aasaas ahaan nooca xaraashka ah. Hooska hoose wuxuu muujinayaa sida nidaamka xaraashka ah uu u shaqeeyo.
Qabashada suuqgeynta PPC iyada oo loo marayo Google Ads ayaa si gaar ah qiimo leh, sababtoo, sida mashiinka raadinta ugu caansan, Google wuxuu helayaa xaddi badan oo gaadiid ah sidaa daraadeed wuxuu bixiyaa dareenka ugu badan iyo rukunka xayeysiisyadaada. Inta jeer ee aad ku aragto xayeysiisyadaada PPC waxay ku xiran tahay ereyada muhiimka ah iyo noocyada isboortiga aad doorato. Inkastoo dhowr arrimood oo qeexaya sida guulahaaga ah ee ololaha xayeysiiska ee PPC uu noqon doono, waxaad ku guuleysan kartan a wax badan adoo diiradda saaraya
Qodobka Muhiimka ah – Ku-qorida liistooyinka muhiimka ah ee PPC-ga, koox-kooxood oo xooggan oo ku dhagan, iyo qoraal sax ah.
Tayada Bogga Tayada – Abuuritaanka boggaga soo degida ee la yareeyey oo leh waxyaabo la isku halleyn karo, ku haboon iyo ficil toos ah, oo loo qoondeeyay su’aalo gaar ah.
Natiijada Tayada – Natiijada Tayada waa qiimeynta Google ee tayada iyo tixgelinta ereyada muhiimka ah, bogagga soo degaya, iyo ololayaasha PPC. Xayeysiiyeyaasha leh natiijooyin Tayo leh oo tayo leh ayaa ka helaya lacago badan oo qiimo jaban.
Daraasada Keydka PPC
Daraasad cilmi-baaris ah oo loogu talagalay PPC waxay noqon kartaa mid aan macquul ahayn waqti-waqti, laakiin sidoo kale waa mid aad u muhiim ah. Ololahaaga guud ee PPC waxaa lagu dhisay erayo muhiim ah, iyo kuwa ugu sarreeya ee Google Adsbiyeyaashu waxay si joogto ah u koraan oo u nadiifiyaan liistada keydka PPC. Haddii aad kaliya sameyso baaritaanka kelmado muhiim ah hal mar, marka aad abuurayso ololihii ugu horeeyay, waxaa laga yaabaa inaad ka maqnayd boqollaal kun oo qiimo badan, qoondayn dheer, qiimo hoose oo muhiim ah oo ku xiran gaadiidkaaga goobtaada.
Liistada muhiimka ah ee PPC waa inay noqotaa: Khusuusiga – Dabcan, ma rabtid inaad bixiso khadka internetka oo aan waxba ka qaban ganacsigaaga. Waxaad dooneysaa inaad raadiso ereyooyinka la beegsan yahay oo horseedi kara qiimo sare oo PPC ah, qiimo waxtar leh guji, iyo faa’iidooyin badan. Taas macnaheedu waa ereyada muhiimka ah ee aad ku soo bandhigeyso waa inay la xiriiraan bixinta aad ku iibineyso. Dhiig – Daraasaddaada muhiimka ah waa in lagu daro oo kaliya calaamadaha ugu caansan iyo inta badan la raadiyo ee ku jira nuuggaada, laakiin sidoo kale dabada dheer ee raadinta. Qodobbada muhiimka ah ee muhiimka ah ee loo yaqaan ‘keywords’ ayaa ah mid gaar ah oo aan caadi ahayn, laakiin waxay ku dari doonaan inay ku xisaabtamaan inta badan taraafikada raadinta. Intaa waxaa dheer, inay yar yihiin tartan, sidaas darteedna way ka qaalisan yihiin. Expandive – PPC waa arrin ku salaysan. Waxaad dooneysaa inaad si joogto ah u nadiifiso oo aad u ballaariso ololehaaga, oo aad abuurto jawi kaas oo liiska keyword-kaaga ah uu si joogto ah u korayo oo loo waafajiyo. Haddii aad rabto in aad hesho mugga-sare, keywords gaar ah oo warshadaha si aad u isticmaashid ololayaasha PPC, hubi inaad eegto keywords keywords caan ah.
Maaraynta Hawlgalladaada Dadweynaha ee PPC Marka aad abuurto ololehaaga cusub, waxaad u baahan doontaa inaad si joogto ah u maamusho si aad u hubiso in ay sii wadaan waxtarka. Xaqiiqdii, dhaqdhaqaaqa akoontiga caadiga ah waa mid ka mid ah saadaasha ugu fiican ee xisaabtanka guusha. Waa inaad si joogto ah u falanqeysaa waxqabadka koontadaada iyo sameynta isbedeladan soo socda si aad udhaqaajiso ololehaaga: Ku dar ereyada “PPC”: Ballaadhinta gaadiidkaaga ee PPC adiga oo ku daraya erayada muhiimka ah ee ku haboon ganacsigaaga. Ku dar ereyada xun: Ku dar shuruudaha aan badeleynin sida erayga kale ee muhiimka ah. Xayeysi Kooxaha Xayeysiinta: Hagaajinta qiimaha riixitaanka (CTR) iyo Natiijada Tayada adoo ku daraya qoraalo fara badan oo lagu beegsanayo iyo boggaga soo degaya kooxo yaryar, oo aad u habboon. Dib-u-eegid Qodobo muhiim u ah PPC Keywords: Dib u eeg qiimaha qaaliga, keywords key-key oo xir haddii loo baahdo. Dib-u-soo-celi Meelaha Xuduudaha: Boggagaaga soo degaya si aad ula socoto su’aalo raadin shakhsi ah si loo kordhiyo heerarka is-beddelka. Ha u dirin dhammaan taraafikada isla bogga. Waxaad baran doontaa wax badan oo ku saabsan dhammaan waxyaabahan maareynta maareynta xisaabaadka PPC markaad horey u sii marayso shaqada koorsada ee Jaamacadda PPC. Haddii aad diyaar u tahay inaad ku bilawdid PPC, ka gudub si aad u ogaatid sida loo sameeyo koonto Google Ads. Haddii aad horey u heshay xisaabta Ads, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho nooca AdWords ee BULSHADA BILAASH ah si aan kaaga caawinno inaad ku laabato meelihii horumarinta. In 60 ilbiriqsi ama ka yar, waxaad heli doontaa warbixinno habaysan 9 goobood oo muhiim ah, oo ay ku jirto qiimaha riixa, Qeybta Tayada iyo waxqabadka akoonka.
Ganacsiyada ma u baahan yihiin bar internet?